Articles Archives - Akhayar Media - Myanmar Lifestyle, Tech Review, Food Review
Articles	What's New	What's Rising	What's Hot	What's New
စမတ်ဖုန်းရဲ့ လုံခြုံရေးစနစ်မှာ Fingerprint က အမြန်ဆန်ဆုံးနဲ့ စိတ်အချရဆုံးပဲ
Articles Endorsed By Tech
စမတ်ဖုန်းရဲ့ လုံခြုံရေးစနစ်မှာ Fingerprint က အမြန်ဆန်ဆုံးနဲ့ စိတ်အချရဆုံးပဲ ဒီနေ့ခေတ်မှာ စမတ်ဖုန်းတွေကို ဆက်သွယ်ရေး ကိရိယာတစ်ခုအပြင် ဖျော်ဖြေရေးပစ္စည်း၊ လုပ်ငန်းဆောင်တာ တွေအတွက် မှတ်စုအသေးစား၊ အချက်အလက် သိုမှီးဖို့ device တစ်ခု စသဖြင့်ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ အသုံးပြုနေကြပါပြီ။ သွားလေရာ သယ်ဆောင်သွားပြီး အရေးကြီး အချက်အလက်တွေ၊ ဆက်သွယ်ရမယ့် နံပါတ်တွေ ရှိနေတဲ့ စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးဟာ လုံခြုံရေးစနစ် တစ်ခုလည်း မဖြစ်မနေ လိုအပ်လာပါတော့တယ်။ ဒါကြောင့် စမတ်ဖုန်းတွေရဲ့ လုံခြုံရေးစနစ်အတွက် screen lock တွေကို အသုံးပြုလာကြပါတယ်။ အချို့ကလည်း screen lock ကို အသုံးမပြုဘဲ သီးခြား တစ်ခုချင်းစီအဖြစ် ဖိုင်တွေ၊ app တွေကိုပဲ လုံခြုံရေး […]
ဖုန်းတွေကို လွယ်လွယ်ကူကူ ဘယ်လိုမျိုး Hack ကြသလဲ
Articles Knowledge Lifestyle Tech
ဖုန်းတွေကို လွယ်လွယ်ကူကူ ဘယ်လိုမျိုး Hack ကြသလဲ လူတစ်ယောက်က သင့်ရဲ့ဖုန်းကို Hack ဖို့ဘယ်လောက်လွယ်တယ်ဆိုတာကို သိပါသလား။ သူတို့ဟာ ဖုန်းကိုလှမ်း Hack ပြီး အရှေ့ကင်မရာကနေတစ်ဆင့် သင့်ကိုမြင်နေရပါတယ်။ သင့်ဖုန်းနဲ့လုပ်သမျှအရာအားလုံးကိုလည်း သူတို့ကစောင့်ကြည့်နေလို့ရပါတယ်။ ဖုန်းတစ်လုံးကို Hack ဖို့ အလွယ်ဆုံးနည်းလမ်းနှစ်ခုရှိပါတယ်။ ပထမဆုံး iPhone လို့ပဲဆိုကြပါတော့။ သင့်ရဲ့ Passcode ကိုသိတဲ့သူတစ်ယောက်ယောက် (ဥပမာ – ချစ်သူ၊သူငယ်ချင်း၊ အစ်ကို၊ အဖေ၊ အမေ) က သင့်ကိုဖုန်းကနေတစ်ဆင့် စုံစမ်းထောက်လှမ်းမှုတွေ လုပ်လို့ရပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုထောက်လှမ်းနိုင်အောင်လို့ အကူအညီပေးနေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေ အွန်လိုင်းပေါ် မှာအများကြီး ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီထဲကနာမည်ကြီးတဲ့တစ်ခုက FelxiSPY.com ပါ။ အဲ့ဒီက ဆော့ဝ်ဝဲလ်အကူအညီနဲ့ ကိုယ်ထောက်လှမ်းချင်တဲ့ ဖုန်းရဲ့ […]
ရှန်ဟိုင်းမှာ Vivo ရဲ့ Under Display Fingerprint က အတောက်ပဆုံး ဖြစ်လာမှာလား
Articles Endorsed By News Lifestyle Tech
ရှန်ဟိုင်း ကမ္ဘာ့မိုလ်ဘိုင်း ညီလာခံမှာ Vivo ရဲ့ Under Display Fingerprint Function က အတောက်ပဆုံး ဖြစ်လာမှာလား ရှန်ဟိုင်း ကမ္ဘာ့မိုလ်ဘိုင်းညီလာခံကြီးဟာ လာမယ့် ဇွန်လ ၂၈ ရက်နေ့မှာ စည်းကားသိုက်မြိုက်စွာနဲ့ ကျင်းပတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ မိုလ်ဘိုင်း ကုမ္ပဏီတွေက ဒီညီလာခံကြီးမှာ သူတို့ရဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် နည်းပညာတွေ၊ ထုတ်ကုန်တွေကို မိတ်ဆက်ပေးလေ့ရှိတာကြောင့် တစ်ကမ္ဘာလုံးကလည်း စိတ်ဝင်တစား စောင့်ကြည့်လေ့ ရှိကြပါတယ်။ ဒီ Shanghai MWC conference ကြီး မကျင်းပမီမှာ တရုတ်အခြေစိုက် Vivo smart phone ထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီကြီးရဲ့ နည်းပညာသစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ under display fingerprint […]
Vivo ရဲ့ အသုံးဝင်လွန်းတဲ့ Long Screen Shot
CEO နှုတ်ထွက်သွားတဲ့ Uber ရဲ့နောက်ကွယ်ကပြဿနာများ
Articles Knowledge Lifestyle News Lifestyle Tech
CEO နှုတ်ထွက်သွားတဲ့ Uber ရဲ့နောက်ကွယ်ကပြဿနာများ Uber ကို အခုအချိန် မြန်မာနိုင်ငံမှာတော်တော်များများသိနေကြပါပြီ။ ရန်ကုန်မြို့ကိုစစဝင်လာချင်းမှာပဲ ဒီတက္ကစီငှားဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ App ဟာ ကားငှားစီးတဲ့သူတွေကို ပရိုမိုးရှင်းဘုန်းဘလအောပေးခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ အသုံးပြုသူတော်တော်များများက Uber နဲ့ငှားရတာ ဈေးကြီးတယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။ တကယ်တော့ အမေရိကအခြေစိုက် Uber ကုမ္ပဏီကြီး ဒီနှစ်ပိုင်း ပြဿနာမျိုးစုံကြုံတွေ့နေရတဲ့ ကုမ္ပဏီပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကလည်း Uber ရဲ့တည်ထောင်သူလည်းဖြစ် CEO လည်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ Travis Kalanick နှုတ်ထွက်သွားခဲ့ပါပြီ။ ဒီနှစ်အတွင်း Kalanick ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ Uber ရဲ့ပြဿနာပေါင်းသောင်း ခြောက်ထောင်ကို ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီဇင်ဘာကနေ CEO နှုတ်ထွက်သွားတဲ့ ရက်စွဲအလိုက်လေ့လာနိုင်အောင်လို့ အခရာကဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ Trump ဝေဖန်ခံရတဲ့အချိန်မှာ ကြားညှပ်ခဲ့တဲ့ Kalanick […]
Window မှာ Folder လေးတွေကို အရောင်လှလှထားကြမယ်
Window နဲ့ Mac OS X ရဲ့ကွာခြားချက်တစ်ခုကတော့ Window မှာ Folder တွေရဲ့အရောင်ကိုစိတ်ကြိုက် Color ပြောင်းပြီးသုံးလို့မရတာပါပဲ။ အရင်ကပေါ့။ အခုချိန်မှာတော့ နည်းပညာတွေ တစ်နေ့တစ်ခြားတိုးတက်လာတာဖြစ်တာကြောင့် ကိုယ်အသုံးပြုနေတဲ့ ကွန်ပျူတာကို Customize လုပ်လို့ရတဲ့ Software တွေပေါ်ထွက်လာပါပြီ။ ဒီတော့ Folderico Software ကိုသုံးပြီး Desktop ပေါ်မှာ Folder တွေကို အရောင်နဲ့ဘယ်လိုခွဲခြားပြီးသတ်မှတ်မလဲဆိုတာ အခရာမှ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီ Folderico Software ဟာကိုယ်ကြိုက်တဲ့ အရောင်ကိုထားချင်တဲ့ Folder မှာ စိတ်ကြိုက်အရောင်ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ အရင်ဆုံးဒီကနေ Download ဆွဲပါ။ Download Link : http://www.softpedia.com/get/PORTABLE-SOFTWARE/System/System-Enhancements/Windows-Portable-Applications-Portable-Folderico.shtml Download ဆွဲပြီးရင်တော့ […]
မြေအောက်မြို့တော်ဆိုတာထက် Hyperloop နည်းပညာက ပိုကောင်းလေမလား
မြေအောက်မြို့တော်ဆိုတာထက် Hyperloop နည်းပညာ ကပိုကောင်းလေမလား ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့တစ်ချိန်မှာ မြေအောက်မြို့တော်ကြီးကို တည်ဆောက်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နောင်ဆယ်နှစ်လား၊ အနှစ်နှစ်ဆယ်လားကတော့ သေချာမပြောနိုင်သေးပါဘူး။ ကျွန်တေ်ာ့အမြင်မှာတော့ မြေအောက်မြို့တော်ထက်စာရင် မြေအောက်ရထားလမ်းက ပိုပြီးတော့နီးစပ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ မြေအောက်ရထားက အခုဝန်ထမ်းတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့ လမ်းကြောပိတ်မှုကြောင့် လမ်းပေါ်မှာအချိန်ကုန်နေရတာကိုတွေလျော့ပါးသွားနိုင်လို့ပါ။ ရန်ကုန်ရဲ့မြို့ပတ်ရထားစနစ်က ကောင်းမွန်တဲ့ရထားစနစ်ဖြစ်ပေမယ့် မြေအောက်ရထားစနစ်က ပိုပြီးတော့သင့်တော်တယ်လို့ မြင်မိပါတယ်။ မြေအောက်ရထားစနစ်က နိုင်ငံတော်တော်များများမှာ သုံးစွဲနေသလို ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်နီးချင်း ထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်း အောင်မြင်နေတဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဘန်ကောက်မြို့ဆိုတာကလည်း ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုပြဿနာကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ မြို့တော်ဖြစ်ပေမယ့် ရထားစနစ်က သုံးစွဲသူတွေကို အချိန်ကုန်အများကြီးသက်သာစေပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အခုချိန်မှာ မြေအောက်ရထားစနစ်ထက်ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ Hyperloop ဆိုတဲ့ နည်းပညာပေါ်နေပါပြီ။ စမ်းသပ်ဆဲကာလလို့ပြောလို့ရပေမယ့် အမေရိကမှာ SpaceX နဲ့ Tesla တို့ရဲ့စီအီးအို Elon […]
ရှားပါးပြီး သီးသန့်ဖြစ်တာကိုမှ နှစ်သက်တဲ့သူတွေအတွက် V5 Black Limited Edition
ရှားပါးပြီး သီးသန့်ဖြစ်တာကိုမှ နှစ်သက်တဲ့ သူတွေ အကြိုက်တွေ့နေကြတဲ့ V5 Black Limited Edition ရှားပါးပစ္စည်းတွေက ပိုပြီး တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့ စကားက အရမ်းပဲ မှန်တယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။ လူတွေရဲ့ သဘောသဘာဝအရ သူများနဲ့ အတူတူမဟုတ်ဘဲ တစ်မူထူးခြားတာတွေ၊ ရှားပါးတာတွေကို နှစ်သက်ကြလို့ပါပဲ။ ဥပမာအားဖြင့် ကမ္ဘာပေါ်မှာ တန်ဖိုးကြီးပါတယ်ဆိုတဲ့ မေဘက် အိက်ဇလရို၊ လမ်ဘော်ဂီနီ၊ ဖာရာရီ စတဲ့ ကားတွေကို ကန့်သတ်အရေအတွက်နဲ့ ထုတ်လုပ်အောင်မြင်နေတာ၊ လူတွေ အရူးအမူး စွဲလမ်းနေကြတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ကမ္ဘာပေါ်က စီးပွားရေး လုပ်ငန်းကြီးတွေဟာ သူတို့ရဲ့ ထုတ်ကုန်ထဲက အချို့ကို ကန့်သတ်အရေအတွက်နဲ့ ထုတ်လုပ်ပြီး ဈေးကွက်ထဲကို တင်ပို့ရောင်းချကြပါတယ်။ ဒါဟာ […]
မြေအောက်မြို့တော်ဆိုတာထက် Hyperloop နည်းပညာက ပိုကောင်းလေမလား	Min Thu Kha
Window မှာ Folder လေးတွေကို အရောင်လှလှထားကြမယ်	Jan
ရှားပါးပြီး သီးသန့်ဖြစ်တာကိုမှ နှစ်သက်တဲ့သူတွေအတွက် V5 Black Limited Edition	Min Thu Kha
CEO နှုတ်ထွက်သွားတဲ့ Uber ရဲ့နောက်ကွယ်ကပြဿနာများ	Min Thu Kha
Facebook အစား ဒီWebsite ၁၀ ခုနဲ့ သင့်ကိုယ်သင် အဆင့်မြှင့်တင်ကြည့်ပါ	Joker
လူတိုင်းနီးပါးဟာ တစ်နေ့ကို ၂ နာရီလောက် ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာ အချိန်ဖြုန်းတတ်ကြပါတယ်။ ပြန်စဉ်းစားကြည့်ကြမယ်ဆိုရင် အဲဒီလို ၂ နာရီလောက် ပုံမှန်အချိန်ဖြုန်းနေပမယ့် အဲဒီကနေ လောက်လောက်လားလား မက်လောက်စရာ ကျွန်တော်တို့ ဘာပြန်ရပါသလဲ။ ဘာသာစကားအသစ်တွေ လေ့လာမိသလား? တခြားအရည်အသွေးတွေ မြင့်တက်လာသလား? အခု ကျွန်တော်က အခရာ ပရိတ်သတ်တွေကို လူမှုကွန်ယက်မဟုတ်တဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာ Website ၁၀ ခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။ ဒီ Website ၁၀ ခုက ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ ဘဝကို ပိုစမတ်ကျကျ တိုးတက်လာစေမယ့် Website တွေဆိုတာကိုတော့ အာမခံပါတယ်။ ကြည့်ကြရအောင် … 1.Unplug The TV ဒီ Website ထဲကို တစ်ကြိမ်ဝင်ကြည့်လိုက်တိုင်းမှာ […]
လူတိုင်းငေးမောကြရမယ့် Apple ရဲ့ iCar	Min Thu Kha
လူတိုင်းငေးမောကြရမယ့် Apple ရဲ့ iCar မောင်းသူမဲ့ကားလောကမှာ အစတုန်းကတော့ Apple က Software ပိုင်းကိုပဲတာဝန်ယူလုပ်ဆောင်ပေးမလိုနဲ့ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ကိုယ်တိုင်မောင်းသူမဲ့ကားထုတ်လုပ်ဖို့ ပြင်ဆင်နေပါပြီ။ ဒါက ကားဈေးကွက်တစ်ခုလုံးကို တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားစေပါတယ်။ Apple က မောင်းသူမဲ့ကားလောကကို ၂၀၁၃၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်ကတည်း တိုးတိုးတိတ်တိတ်ဝင်ရောက်နေတယ်ဆိုပေမယ့်တရားဝင်ကြေငြာခဲ့တာကတော့ မကြာသေးပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ မောင်းသူမဲ့ကားပရိုဂျက်ကို “Project Titan” လို့ခေါ်ပါတယ်။ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်မှာ သူတို့ရဲ့မောင်းသူမဲ့ကားကို တရားဝင်စမ်းသပ်နိုင်ဖို့အတွက် ပြည်နယ်အစိုးရရဲ့ဆီကို တရားဝင်စာတင်ရပါတယ်။ Appleက သူတို့ရဲ့မောင်းသူမဲ့ကားပရိုဂျက်ကို “Project Titan” အမည်နဲ့စာတင်ခဲ့ပြီး သင်္ကြန်အကျနေ့တုန်းက တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်ရခဲ့ပါပြီ။ Apple ကလည်း သူတို့ရဲ့ကားပရိုဂျက်အတွက် ကျွမ်းကျင်အင်ဂျင်နီယာ အယောက် ၁၀၀၀ ကျော်ကို ငှားရမ်းနေပါတယ်။ အတော်ဆုံးတော်ကိုရွေးချယ်နေသလို […]
သမ္မတထရမ့်ရဲ့ ဒေါ်လာတစ်သန်းခွဲတန် ‘Beast’ ကားသစ်ကြီးအကြောင်း	Joker
အမေရိကန်သမ္မတတွေစီးတဲ့ ကားတွေကို ‘The Beast’ ဒါမှမဟုတ် Cadillac One လို့ လူသိများပါတယ်။ သမ္မတ ထရမ့်အနေနဲ့ သူ့ရဲ့ Personal Limousine ဝန်ဆောင်မှုကနေ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ကားသစ်နဲ့အတူ သမ္မတအဖြစ် စီးနင်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အပေါ်မှာ ပြထားတဲ့ ပုံကတော့ သမ္မတရဲ့ကားမှာ ပါဝင်မယ့် အချက်အလက်တချို့ကို ဖော်ပြထားတာပါ။ ဒီ ဆီဒင်ကားဟာ အတူထားရှိမယ့်နှစ်စီးထက် ပိုမိုကြီးမားမှာဖြစ်ပြီး အထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် အသစ်တွေကိုလည်း ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့ ခက်ခဲကြောင်း သိရပါတယ်။ Donald Trump ရဲ့ ဗုံးဒဏ်ခံလီမိုဟာ စစ်တပ်ပုံစံ ဓာတုတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလည်း ခံနိုင်ရည်ရှိကြောင်း သိရပါတယ်။ ဒေါ်လာ ၁.၂သန်းတန်ကားဟာ ကမ္ဘာ့လုံခြုံမှုရှိဆုံး မော်တော်ယာဉ်တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပြီး […]
အသစ်ထွက်မည့် iPhone ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ အောက်သာ ကျသင့်မည်	Jan
UBS Analysts ရဲ့သတင်းအရ အသစ်ထွက်ရှိမယ့် iPhone တွေရဲ့ဈေးနှုန်းဟာ ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ဖြစ်နိုင်ဖွယ်မရှိလို့ ခန့်မှန်းထားကြောင်းသိရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် iPhone ချစ်သူအများစုဟာ ၁၀နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ထွက်ရှိလာမယ့် iPhone ကို မျှော်လင့်နေ ကြောင်းသိရပါတယ်။ Anniversary iPhone လို့ လက်တ်လော တင်စားခေါ်ဝေါ်နေကြတဲ့ Apple ၁၀နှစ်ပြည့်ဖုန်းကို တစ်ချို့က iPhone 8 လို့ခေါ်သလို တစ်ချို့ကတော့ iPhone 10 ခေါ်တာတွေ့ရှိရပါတယ်။ ဈေးနှုန်းတွေကိုတော့ 64GB Entry Level ဖုန်းတစ်လုံးကို ဒေါ်လာ ၈၅၀ ဒါမှမဟုတ် ၉၀၀ ခန့် ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။ Apple iphone တွေဟာ ခေတ်ရေစီးကြောင်းအရ လူသိများတဲ့ […]
iPhone နားကြပ်ရဲ့ လူသိနည်းတဲ့ အမိုက်စားစွမ်းဆောင်ရည်များ	Joker
သင့်အနေနဲ့ Apple က ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ iPhone နားကြပ်ကို ရိုးရိုးနားကြပ်တစ်ခုလို့ပဲ မြင်မိမှာပါ။ တကယ်တော့ iPhone နားကြပ်မှာ လူသိနည်းနေသေးတဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်တွေ အများအပြားရှိနေပါတယ်။ ဒီလို လျို့ဝှက်နေတဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်တစ်ချို့မှာ အခရာပရိသတ်တွေအတွက် တော်တော်အသုံးတည့်မယ့် စွမ်းဆောင်ရည်တွေလည်း ပါနေသေးတာကြောင့် အခုပဲ လေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင်။ Calls များစွာကို လက်ခံဖြေဆိုနိုင်ခြင်း လူတစ်ယောက်နဲ့ ဖုန်းပြောနေတဲ့အချိန်မှာ တစ်ခြား အက်ပလီကေးရှင်းကနေ ဖုန်းဝင်လာတာမျိုးတွေဖြစ်လာတဲ့အခါ စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး။ ဖုန်းပြောနေတဲ့အချိ်န်မှာ iPhone နားကြပ်ရဲ့ အလယ်ခလုတ်ကို ဖိထားပြီး calls တွေကို တစ်ပြိုင်တည်း လက်ခံဖြေကြားနိုင်မှာပါ။ Siri ကို Activate ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း iPhone တွေမှာ ပါဝင်တဲ့ […]